Google မှာ Website Ranking ကောင်းဖို့ဆိုဘာတွေလိုအပ်လဲ? -
Digital Marketing နယ်ပယ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဆို ရင်တော့ ဒီ အချက်လေးတွေကို အခြေခံသဘောတရားလောက်တော့သိထားသင့်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေး မယ်အချက်လေးတွေကတော့ Digital Marketing နယ်ပယ်မှာပါဝင်တဲ့ SEO ရဲ့အရေးပါပုံနဲ့ သိရှိသင့်တဲ့အခြေခံအချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့် Website ကို Google မှာ Ranking ကောင်းကောင်း ရချင်ပါ သလား? သင်ကိုယ်တိုင်သင့်ရဲ့ Website Rank ကောင်းအောင် သတိထားပြီးလေ့လာနိုင်မဲ့ SEO Tips အချို့ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်…
Posted by Min Thuta/ Thursday September 20th, 2018/ Blog/0Comment